Dagaal culus oo dib uga qarxay deegaano ka tirsan G/Mudug – Hornafrik Media Network
Dagaal culus oo dib uga qarxay deegaano ka tirsan G/Mudug
By Liibaan Nuur	 On Dec 9, 2019
Wararka ka imaanaya Bariga gobolka Mudug ayaa sheegaya in saakay uu ka soconayo dagaal xoog leh oo u dhaxeeya laba maleeshiyo oo ka soo kala jeeda Puntland iyo Galmudug.
Dagaalkan ayaa wuxuu ka soconaya deegaanka Towfiiq oo dhaca koonfurta gobolka Mudug, waxaana sidaan oo kale Khamiistii la soo dhaafay dagaal labadaas beelood ku dhex maray deegaankaas ku dhintay ku dhawaad 20 ruux oo ka soo kala jeeda dhinacyada dagaalamaya.
Maleeshiyaadkaas ayaa tan iyo Khamiistii waxay isku aruursanayeen gurmadyo waxaana la sheegay in labada dhicanba ay soo gaareen gurnmadyo xoog leh, kuwaas oo maalimihii la soo dhaafay isku hor fadhiyey inta u dhaxeysa deegaanada Towfiiq iyo Af-Barwaaqo oo ka wada tirsan gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya.
Xiisadan ayaa waxay baqdin ku keentay dadkii deegaanka, kuwaas oo guryahooda uga cararay si aanay waxyeelo uga soo guurin, waxayna qoysaska qaar deegaanadaas ka qaxeen inta uusan bilaaban dagaalku.
Dowladda federaalka oo shalay war ka soo saartay dagaalkan ayaa beelaha ay dirirtu u dhaxeyso ugu baaqday inay colaadda joojiyaan, iyadoo ciidamada isku dhafka ah ee ka howlgala qeybo ka mid ah gobolka lagu amray inay sida ugu dhaqsiyaha badan u kala dhex galaan beelaha dagaalamaya.
Sidoo kale dowladda ayaa warkeeda ku sheegtay inay deegaanada lagu dagaalamayo ee Towfiiq iyo Af-Barwaaqo ay u direyso guddi ka qeyb qaata daminta dagaalka iyo xal ka gaaridda colaadaas.
Mareykanka oo lagu eedeeyay in ay ku guul dareysatay dagaalka Al-Shabaab
Maxkamadda ciidamada oo xukun ku riday Askari dilay Haweeney ganacsato aheyd